Mutemo weKuki - Cazoo
musha » Cookie mutemo
Mune zvimwe zviitiko tinogona kushandisa makuki kutora ruzivo rwemunhu, kana izvo zvinova ruzivo rwevanhu kana tikazvibatanidza nerumwe ruzivo.
Cookies idiki dhata mafaira akaiswa pakombuta yako kana nharembozha paunoshanyira webhusaiti. Cookies anoshandiswa zvakanyanya nevaridzi vewebhusaiti kuitira kuti mawebhusaiti avo ashande, kana kushanda zvakaringana, pamwe nekupa ruzivo rwekuzivisa.
Cookies akaiswa nemuridzi webhusaiti (mune iyi kesi, Cazoo.it) inonzi "yekutanga pati makuki". Cookies akaiswa nemapato asiri iwo muridzi webhusaiti anonzi "echitatu bato makuki". Chechitatu bato makuki anogonesa chechitatu bato maficha kana mashandiro kuti apihwe pane kana kuburikidza newebhusaiti (semuenzaniso sekushambadzira, zvinofambidzana zvemukati uye analytics). Iwo mapato anoisa makuki echitatu echitatu anogona kuziva komputa yako zvese kana ichishanyira webhusaiti iri mubvunzo uyezve painoshanyira mamwe mawebhusaiti.
Nei tichishandisa makuki?
Tinoshandisa kutanga uye chechitatu pati makuki nekuda kwezvikonzero zvakati wandei. Mamwe makuki anodikanwa nekuda kwezvikonzero zvehunyanzvi kuitira kuti mawebhusaiti edu ashande, uye isu tinoreva aya se "akakosha" kana "akanyatso kudikanwa" makuki. Mamwe makuki anotigonesa kuteedzera uye kunongedza zvido zvevashandisi vedu kusimudzira ruzivo pane edu ePamhepo Zvivakwa. Vechitatu mapato vanoshandisa makuki kuburikidza nemawebhusaiti edu kushambadzira, analytics uye zvimwe zvinangwa. Izvi zvinotsanangurwa zvakadzama pazasi.
Iwo chaiwo marudzi ekutanga uye chechitatu bato makuki anoshandiswa kuburikidza nemawebhusaiti edu uye zvinangwa zvavanoita zvinotsanangurwa pazasi (ndapota ziva kuti iwo makuki akashumwa anosiiwa anogona kusiyana zvichienderana neZvakatarwa Zvivakwa zvepaInternet zvaunoshanyira):
Ndingaite sei kudzora makuki?
Iwe une kodzero yekusarudza kuti wobvuma kana kuramba makuki. Unogona kushandisa kodzero dzako dzekuki nekumisikidza zvaunofarira muCookie Consent Manager. Iyo Cookie Consent Manager inokutendera kuti usarudze ndedzipi mhando dzekuki dzaunogamuchira kana kuramba. Makuki akakosha haagoni kurambwa sezvo achinyatso kudikanwa kuti akupe masevhisi.
Iyo Cookie Chibvumirano maneja inogona kuwanikwa mune yekuzivisa banner uye pane yedu webhusaiti. Kana ukasarudza kuramba makuki, unogona kuramba uchishandisa webhusaiti yedu kunyangwe kugona kwako kune kumwe kushanda uye nzvimbo dzewebhusaiti yedu dzinogona kudzorwa. Iwe unogona zvakare kuseta kana kugadzirisa ako webhu browser mabhurawuza kuti ugamuchire kana kuramba makuki. Sezvo nzira dzaunogona kuramba makuki kuburikidza newebhu browser yako zvinodzora zvinosiyana kubva kubhurawuza-kuenda-kubhurawuza, iwe unofanirwa kushanyira bhurawuza menyu menyu kuti uwane rumwe ruzivo.
Pamusoro pezvo, mazhinji maratidziro ekushambadzira anokupa iwe nzira yekubuda mukushambadzira kwakanangwa. Kana iwe uchida kutsvaga rumwe ruzivo, ndapota shanya http://www.aboutads.info/choices/ or http://www.youronlinechoices.com.
Iwo chaiwo marudzi eakatanga uye echitatu bato makuki anoshandiswa kuburikidza nemawebhusaiti edu uye zvinangwa zvavanoita zvinotsanangurwa mutafura iripazasi (ndapota ziva kuti yakatarwa Cookies dzakapihwa dzinosiyana zvichienderana neZvakatarwa Zvivakwa zvepaInternet zvaunoshanyira):
Zvakakosha mawebhusaiti makuki:
Aya makuki akanyatso kudikanwa kuti akupe masevhisi anowanikwa kuburikidza nemawebhusaiti edu uye kushandisa zvimwe zvacho, sekuwana nzvimbo dzakachengeteka.
Chinangwa: Inoshandiswa neCloudflare kuona mumwe mutengi kuseri kweiyo yakagovaniswa IP kero, uye shandisa machengetedzo marongero pane yega-mutengi hwaro. Iyi ikiki yerudzi rweHTTP inopera mushure megore rimwe.
Basa: CloudFlare Wona Sevhisi Yakavanzika Policy
Country: nyika dzakabatana
Inopera mu: 30 mazuva
Chinangwa: Inoshandiswa kurekodha yakasarudzika yevaenzi maonero ebvumo mvumo.
Basa: Pari zvino Wona Sevhisi Yakavanzika Policy
Inopera mu: 1 gore
Performance uye mashandiro emakuki:
Aya makuki anoshandiswa kusimudzira mashandiro uye mashandiro emawebhusaiti edu asi haana kukosha mukushandisa kwavo. Nekudaro, pasina makuki aya, mamwe mashandiro (semavhidhiyo) anogona kunge asisipo.
Chinangwa: Iyo cookie yakagadzika saka Hotjar inokwanisa kuteedzera kutanga kwerwendo rwemushandisi kweiyo yakazara chikamu kuverenga. Iyo haina chero ruzivo rwunozivikanwa.
Mupiro: . Markoo.it
Basa: Hotjar Wona Sevhisi Yakavanzika Policy
Inopera mu: 30 kwemaminitsi
Analytics uye customization makuki:
Aya makuki anounganidza ruzivo rwunoshandiswa chero mune yehuwandu fomu kutibatsira kuti tinzwisise kuti maWebhusaiti edu ari kushandiswa sei kana kuti mashandiro edu ekushambadzira ari kushanda zvakadii, kana kutibatsira kugadzirisa mawebhusaiti ako kwauri.
Chinangwa: Inoshandiswa neYandex Metrica seyakajairwa mushandisi ID kubatsira kuteedzera mushandisi muwebhusaiti
Basa: Metrica Wona Sevhisi Yakavanzika Policy
Inopera mu: zvinoramba
Chinangwa: Iyo inorekodha imwe ID yakashandiswa kuuya nedata pamusoro pekushandisa webhusaiti nemushandisi. Iyo HTTP kuki inopera mushure memakore maviri.
Basa: Google Analytics Wona Sevhisi Yakavanzika Policy
Inopera mu: 1 gore 11 mwedzi 29 mazuva
Chinangwa: Inoshandiswa neYandex Metrica yekuziva vashandisi vesaiti. Iyi cookie iripo yenguva yegore rimwe chete.
Basa: Yandex Metrica Wona Sevhisi Yakavanzika Policy
Inopera mu: Makore mana 9 mwedzi 11 mazuva
Chinangwa: Inoshandiswa ne quantserve kurekodha yakasarudzika manhamba anozivisa yako browser uye yekudyidzana nhoroondo. Inopera mumakore mashanu
Basa: Quantcast Kuyera Service Wona Sevhisi Yakavanzika Policy
Inopera mu: 1 gore 1 mwedzi
Chinangwa: Inoshandiswa neYandex Metrica kuona kana mushanyi aine ma block block akaiswa mumabhurawuza avo
Inopera mu: 20 maawa
Name: _gat #
Chinangwa: Inogonesa Google Analytics kudzora mwero wekukumbira. Iyo mhando yeHTTP kuki iyo inogara kwechikamu.
Inopera mu: 1 miniti
Name: _ga_ #
Chinangwa: Inoshandiswa kusiyanisa vashandisi vega pachishandiswa kudomwa kwenhamba inogadzirwa yakasarudzika seyakajairwa mutengi, iyo inobvumira kuverenga kwekushanya uye zvikamu
Inopera mu: 11 mwedzi 30 mazuva
Chinangwa: Iyi cookie inogadzirirwa apo mutengi anotanga kugara pasi neiyo Hotjar script. Iyo inoshandiswa kuenderera Hotjar Mushandisi ID, yakasarudzika kune iyo saiti pane browser. Izvi zvinovimbisa kuti hunhu mukushanya kunotevera kune imwe saiti kunozopihwa kune mumwe mushandisi ID.
Chinangwa: Inoshandiswa neYandex Metrica kuona zuva remushandisi yekutanga saiti saiti.
Chinangwa: Inotumira data senge maitiro evashanyi uye chishandiso kuGoogle Analytics. Iyo inokwanisa kuchengeta track yemushanyi munzira dzekutengesa uye zvishandiso. Iyo pixel tracker yerudzi cookie iyo chiitiko chayo chinogara mukati mekubhurawuza chikamu.
Inopera mu: chiitiko
Chinangwa: Inochengeta mukova weakasiyana ID iyo inozoshandiswa kuunza nhamba yehuwandu pane webhusaiti kushandiswa nevashanyi. Iyo mhando yeHTTP kuki uye inopera mushure mekubvunzurudzwa.
Inopera mu: 1 zuva
Aya makuki anoshandiswa kuita kuti mameseji ekushambadzira ave akakodzera kwauri. Ivo vanoita mabasa sekudzivirira iwo iwo kushambadza kubva kuenderera mberi kuonekazve, kuve nechokwadi kuti kushambadza kunoratidzwa zvakanaka kune vanoshambadzira, uye mune dzimwe nguva kusarudza kushambadza zvinoenderana nezvako zvaunofarira.
Chinangwa: Aya makuki akabatana neB2B yekushambadzira chikuva, yaimbozivikanwa seBizo, iyo yava muridzi weLinkedIn, bhizinesi network network. Iyi sub-domain yakabatana neLinkedIn's yekushambadzira masevhisi ayo anogonesa varidzi vewebhusaiti kuti vawane njere pamhando dzevashandisi pane yavo saiti zvichibva paLinkedIn data data, kugadzirisa kunongedza.
Basa: LinkedIn Wona Sevhisi Yakavanzika Policy
Inopera mu: 1 gore 26 mazuva
Chinangwa: Facebook yekutevera pixel inoshandiswa kuratidza vashanyi veshambadziro yemunhu.
Basa: Facebook Wona Sevhisi Yakavanzika Policy
Inopera mu: 2 mwedzi 29 mazuva
Chinangwa: Inoshandiswa neGoogle AdWords kudzokororazve vashanyi vanogona kushandukira kune vatengi zvichibva pamaitiro evashanyi pamhepo pamawebhusaiti
Basa: AdWords Wona Sevhisi Yakavanzika Policy
Chinangwa: Kunyoresa ID yakasarudzika inoratidza mudziyo wemushandisi unodzoka. Iyo ID inoshandiswa kune zvakanangwa kushambadzira.
Basa: Cox Dhijitari Solutions (Fomerly Gonesa) Wona Sevhisi Yakavanzika Policy
Aya makuki ayo asati aiswa muzvikamu. Isu tiri mukugadzirisa makuki aya nerubatsiro rwevanopa.
Inopera mu: 8 maawa 45 maminitsi
Inopera mu: 2 kwemaminitsi
Ko zvakadiniko nehumwe hutekinoroji hwekutevera, semabaconi ewebhu?
Cookies haisi iyo chete nzira kuziva kana kuteedzera vashanyi kune webhusaiti. Tinogona kushandisa mamwe, akafanana matekinoroji nguva nenguva, sewebhu mabheikoni (dzimwe nguva anonzi "maratidziro emapikisheni" kana "akajeka gifs"). Aya mafaera madiki emifananidzo ane chitupa chakasarudzika chinotigonesa kuziva kana mumwe munhu ashanyira mawebhusaiti edu kana kuvhura e-mail kusanganisira ivo. Izvi zvinotibvumidza isu, semuenzaniso, kuongorora maratidziro evashandisi kubva kune rimwe peji mukati mewebhusaiti kuenda kune imwe, kuendesa kana kutaurirana nemakuki, kuti unzwisise kana iwe wauya kune webhusaiti kubva kushambadziro yepamhepo inoratidzwa pane yechitatu-bato webhusaiti, kugadzirisa saiti mashandiro, uye kuyera kubudirira kweemail kushambadzira mishandirapamwe. Muzviitiko zvakawanda, matekinoroji aya anovimba nemakuki kuti ashande nemazvo, nekudaro kudzika makuki kunokanganisa mashandiro avo.
Iwe unoshandisa Flash kuki kana Yemunharaunda Yakagovaniswa Zvinhu?
Mawebhusaiti anogona zvakare kushandisa izvo zvinonzi "Flash Cookies" (inozivikanwawo seMagariro Akagovaniswa Zvinhu kana "LSOs") ku, pakati pezvimwe zvinhu, kuunganidza nekuchengetedza ruzivo nezve kushandisa kwako masevhisi edu, kudzivirira kubiridzira uye nekumwe kushanda kwenzvimbo.
Kana iwe usiri kuda Flash Cookies yakachengetwa pakombuta yako, unogona kugadzirisa marongero eFlash player yako kuvhara Flash Cookies yekuchengetera uchishandisa maturusi ari mune Webhusaiti Yekuchengetedza Zvirongwa Panel. Iwe unogona zvakare kudzora Flash Cookies nekuenda kune iyo Global Kuchengeta Zvirongwa Panel uye kutevera mirairo (iyo inogona kusanganisira mirairo inotsanangura, semuenzaniso, kudzima Flash Cookies iriko (inonzi "ruzivo" pane saiti yeMacromedia), maitiro ekudzivirira Flash LSOs kuti iiswe pakombuta yako usina kubvunzwa, uye ( yeFlash Player 8 uye gare gare) maitiro ekuvharira Flash Cookies asiri kuendeswa neanoshanda weiyo peji iwe uripo panguva iyoyo).
Ndokumbira utarise kuti kumisikidza Flash Player kudzora kana kudzora kugamuchirwa kweFlash Cookies kunogona kudzora kana kukanganisa mashandiro emamwe mafomu eFlash, kusanganisira, zvingangoita, Flash zvinoshandiswa zvinoshandiswa zvine chekuita nemasevhisi edu kana zvemukati zvepamhepo.
Iwe unoshandira yakanangidzirwa kushambadzira?
Vatatu vanogona kushandira makuki pakombuta yako kana nharembozha kushandira kushambadza kuburikidza nemawebhusaiti edu. Makambani aya anogona kushandisa ruzivo nezve kushanya kwako kune ino nemamwe mawebhusaiti kuitira kuti vape kushambadza zvinoenderana nezve zvinhu nemasevhisi aungafarire. Ivo vanogona zvakare kushandisa tekinoroji inoshandiswa kuyera kushanda kwezviziviso. Izvi zvinogona kuitwa navo vachishandisa makuki kana mawebhu mabheoni kuti vatore ruzivo nezve kushanya kwako kune ino nemamwe masayiti kuitira kuti vape kushambadza zvinoenderana nezve zvinhu nemasevhisi angangoita kufarira kwauri. Ruzivo rwunounganidzwa kuburikidza nemaitiro aya harutigonese isu kana ivo kuti vazive zita rako, ruzivo rwekufonera kana zvimwewo zvinokuzivisa iwe kunze kwekunge iwe uchisarudza kupa izvi.
Ndingawane kupi kumwe ruzivo?
Kana uine mibvunzo pamusoro pekushandisa kwedu makuki kana humwe hutekinoroji, ndapota email kwatiri pa cazooteam@gmail.com.
Iyi cookie cookie yakagadzirwa uchishandisa Termly's Cookie Chibvumirano Maneja.